Soomaaliya: MSF oo siyaadineysa howlaha ay ka wado Muqdisho - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
© Feisal Omar kalkaalisa k atirsan shaqaalaha MSF oo ka howlgaleysa Muqdisho
12 August, 2011. Todobaadka 2 aad ee bishan, hayádda dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn waxaa ay magaalda Muqdisho u dirtey kooxo
dhakhaatiir ah iyo 4 diyaaradood oo sida, 55 ton oo dawooyin, cuntada nafaqa darada lagu daaweeyo iyo qalab caafimaad isuga jira si ay uga jawaabto xaaldda deg degga ah ee k ajirta dalka Soomaaliya. Todobaadyadii la soo dhaafay ku dhawaad 100,000 oo qof ayaa u barakacay caasimadda Muqdisho kuwaas oo ka yimid gobolada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya si ay u helaan gargaar.
MSF waxey bilowdey talaal ka dhan ah cudurka jadeecada oo ay ka wado xeryaha dadka ay abaarta iyo dagaalda barakiciyeen kuwaas oo ay ku nool yihiin kumanaan qoys. Ilaa iyo haatan waxaa talaalkaas la siiyey ku dhawaad 3,000 oo caruur ah.
Ilaa iyo 1,000 canug ayaa laga baaray nafaqa daro. In ka badan 500 ayaa lagu arkey nafaqa daro.
“MSF waxaa ay aad uga walwalsantahay xaaladda dadka barakacay oo ay xaaladoodu aad u darantahay. MSF waxaa ay bilowdey in ay sara u qaado howlaha ay ka wado Muqdisho waxeyna baaritaan ka wadaa deegaanada ku yaala agagaarka caasimadda si ay wax uga qabato xaaldda deg degga ah,” ayuu yiri Dr Unni Karunakara, oo ah madaxweynaha caalamigga ah ee MSF.
Dhakhaatiirta MSF waxey sameeyeen xarun caafimad oo ku meel gaar ah oo ay maalin walba ku daweeyaan 100 qof oo bukaan ah. Waxey sidoo kale xaruntaas ku qeybiyaan qalab kala duwan sida waalasha wax lagu cuno iyo baakado ay dadku gabaad ka sameystaan.
MSF waxey mudo sanado ah gargaar caafimaad ka bixineysey magaalda Muqdisho gaar ahaan xarumaheeda caafimaad oo ku yaala Dayniile iyo Dharkanley oo todobaadkii aynu soo dhafney bukaanka laga siiiyeye 370 latalin caafimaad ah. Si ay u kaafiso baahida sii kordheysa, MSF waxaa ay maalmaha soo socda magaalda Muqdisho ka fureysaa xarun lagu daaweeyo nafaqa darada, olola
talaal ah oo ka dhan jadeecada iyo isbitaal 50-sariirood ah.
MSF waxaa ay si joogta ah uga shaqeyneysey dalka Soomaaliya tan iyo sanadkii 1991 iyadoo haatan ay 8 gobol ka bixiso adeeg caafimaad oo bilaash ah. In ka badan 1,400 oo shaqaala Soomaali ah oo ay taageerayaan 100 kaloo ku sugan Nairobi ayaa 9 gobol oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ka bixiya adeeg caafimaad oo asaasi ah, qaliin, daweynta nafaqa darada iyo caawinta dadka barakacayasha ah oo ay u qeybiso biyo nadiif ah iyo qalab kala duwan.
MSF waxey sidoo kale adeeg caafimaad oo bilaash ah siisaa qaxootiga Soomaalida ah eek u sugan xeryaha Dahagaxleey iyo Ifo oo Kenya ku
yaala iyo xerada Liben oo ku taala Ethiopia. MSF waa hayádda kali ee adeeg caafimaad siisa in ka badan 130,000 oo qof oo ku nool xerada Dhagaxley waxeyna xerada Ifo nafaqa daro ka daaweysaa 6,400 oo caruur ah. Xerada Liben ee Ethiopia, MSF waxey ka howlgashaa 6 xarumood oo ay ku nool yihiin 119,000 oo qof oo qaxooti ah. In ka badan 10,000 oo caruur ah oo xarumahaas ku sugan waxaa
ay ka tirsanyihiin mashruuca daweynta nafaqa darada ee MSF ay wado.
Tags: emergency, Emergency intervention, IDPs, MSF, refugee camps